Shefler ကိုမှန်ကန်စွာချုံပုတ်လုပ်နည်း။ ငါအင်တာနက်ကနေသင်တို့ကိုမပြောပါလိမ့်မယ်! မင်းရဲ့စက်ရုံတစ်ရုံကိုတစ်ချိန်ကဓာတ်မြေသြဇာဖြည့်တင်းပြီးတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ဖျန်းပေးရမယ်။
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအတွင်းရှိသစ်အယ်သီးကိုစောင့်ရှောက်ရန်သိကောင်းစရာများကျွန်ုပ်သည်ထိုသို့သောသစ်အယ်သီးရှိကြောင်း၊ အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲသင်တို့အားငါပြောမည်၊ ကောင်းစွာကြီးထွားလာသည်၊ နွေရာသီတွင်ရေလောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သည်၊ အခွံမာသီးကိုသင်္ဂြိုဟ်ရန်မလိုအပ်သည်၊
Kalanchoe အတွက်ဘယ်လိုမြေဆီလွှာလိုအပ်သလဲ။ Kalanchoe အတွက်မြေဆီလွှာအားကြားခံ (သို့) အနည်းငယ်အက်စစ် (pH 5,5-6,5) ။ အပင်များသည်အရည်ရွှမ်းသောအရာများအတွက်ပုံမှန်အရောအနှောဖြင့်ကောင်းစွာပေါက်ရောက်သည်။ ငယ်ရွယ်သောအပင်များကို ၄ ပိုင်း ခွဲ၍ အစားထိုးသည်။
muraya အတွက်သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှုကဘာလဲ။ ၂ နှစ်အရွယ် muraya မှဘာလို့မထင်ရသေးသောပန်းများသည်ဘာကြောင့်လဲ။ နွေ ဦး ရာသီမှာဘူးသီးနဲ့ muraika ကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ ထို့အပြင် ၁၀ စင်တီမီတာခန့်လည်းရှိသည်။ ပန်းပွင့်စိုက်ပျိုးသူများ၏စီရင်ချက်သည်ရှင်းလင်းစွာမပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပင်ဖြစ်သည်။
သစ်ခွကိုဘယ်လိုသောက်ရမလဲ။ ဒယ်အိုးထဲမှာရေကိုအဆက်မပြတ်ထည့်ပြီးအဲဒီမှာအမြဲတမ်းရှိနေဖို့သေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်၊ ငါအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဤတွင်သစ်ခွကိုပြုလုပ်ရန်ဘာလုပ်ရမလဲ ...
အိမ်တွင်းအပင်များအတွက်ခရမ်းလွန်မီးချောင်းများကိုသုံးနိုင်မလား ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ ULF အကြောင်းလေ့လာခဲ့ပေမယ့်ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီးစတဲ့အပင်များကိုထပ်မံ illumination လုပ်ဖို့ DNAT မီးခွက်များကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သုံးခြင်းကို ...
blooming phalaenopsis ကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးရမလဲ။ Phalaenopsis - အမြဲတမ်းကြီးထွားနေသောသစ်ခွများ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါးပွင့်လာသောသူတို့၏မျိုးစိတ်နှင့် hybrids များသည်အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်တော်သောဂရုစိုက်မှုဖြင့် Phalaenopsis သည်ကြွယ်ဝစွာ၊
စွန်ပလွံပင်၏အရွက်၏အစွန်အဖျားခန်းခြောက်ပါကဘာလုပ်ရမည်ကိုပြောပါ။ အထူးဓာတ်မြေသြဇာရှိပါသလား။ ငါရေအကြောင်းမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်စွန်ပလွံပင်ပေါ်မှာစတုတ္ထအရွက်ဘယ်လိုပေါ်လာသလဲ၊ လုပ်ရမည် ...
အရည်ရွှမ်းကိုမည်သို့ရွှေ့ရမည်နည်း။ အစပြုသူအတွက်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်လိုချင်ပါတယ် အိုးရွေးချယ်ရေး။ သင်သွားမည့်ရှားစောင်းပင်၏အမြစ်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါ် မူတည်၍ မှန်ကန်သောအရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္chooseာန်ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
dieffenbachia သည်အဘယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ရှိသနည်း။ အဘယ်ကြောင့်အဆိပ်ဖြစ်ဟုဆိုသနည်း လက်အိတ်အကြောင်း - အေးမြ! ထို့အပြင်အသက်ရှူကိရိယာ! နောက်အဘိဓာန်တစ်ခု! ငါဖတ်လိုက်တာကယောက်ျားကအားမရှိဘူး၊ ငါ့ကြောင်…
တောင်းထဲမှပန်းများကိုရေလောင်းရန်လိုအပ်ပါသလား။ သေချာတာပေါ့၊ သေချာတာပေါ့၊ ပန်းတွေရေလည်းသောက်တယ်။ ထိုသို့ပြန်လည်ဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင်ကျိန်းသေကရေလောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ် !!! Tatiana, ကောင်းသောညနပေိုငျး! ဤအစိမ်းရောင်ပန်းညှပ်ကိုရေဖြင့်အမြဲဖုံးအုပ်ထားရမည်။
Ficus အရွက်ဆံပင်ကောက်ကောက်ဒီအကြောင်းပြချက်များစွာရှိနိုင်ပါသည်။ ရောဂါများကိုဖယ်ထုတ်ရန်အတွက်သင်သည်အစက်အပြောက်များနှင့်မမှန်မှုများအတွက်လိမ်ရွက်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးသင့်သည်။ သူတို့ဖြစ်လျှင်, အများဆုံးဖွယ်ရှိသင့်ရဲ့ ficus ...
စိမ်းလန်းသောရှားစောင်းပင်ကဘာလဲ ... ဆူးပင်များဖြင့် Cacti သည်အရည်ရွှမ်းသောအပင်များဖြစ်ပြီးအမွေးထူသောအပင်များသည်အောက်ပိုင်းဆံပင်များဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ Cacti အားလုံးနီးပါးတွင်ပုံမှန်အရွက်မရှိကြပါ။ အများစုမှာဆူးများရှိကြပါသည်။ သူတို့ ...
အပင်များအတွက်ကြီးထွားလာရာသီကဘာလဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလ၊ တက်ကြွသောတိုးတက်မှု။ ဤမေးခွန်းကိုဤနေရာတွင်တွေ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ငွေပင်ကိုခုတ်ယူလို့ရသလား။ အလွန်ကြီးမားသောအကိုင်းအခက်များ ... ချွေလိုက်သည် ... ဖြတ်သည်
ပိုက်ဆံတစ်ပင်ကိုခုတ်ယူလို့ရမလား။ အလွန်ကြီးမားသောအကိုင်းအခက်များ ... အတုံးလိုက်ဖြိုဖျက် ... ခဲယဉ်း! ကျွန်တော့်လက်ကဒီလောက်အစွန်းရောက်ဆံပင်ညှပ်ဘို့မထပါဘူး သေချာတာပေါ့။ သင်လိုချင်သည့်အတိုင်းဖြတ်ယူပါ၊
ဘယ်အချိန်မှာ Crassula fatty လူငယ်တစ်မျိုးကိုသင် pinch လုပ်သင့်သလဲ။ အရွက်နှစ်ခုသေးသေးလေးပေါက်ထွက်ချင်းငါ pinch ငါသတ္တုတွင်းစံတစ်ခုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့်အပေါက်ဖြင့်မဆိုဤတွင်ကြီးပွားသည်။ အဘယ်သို့ ...
အဘယ်ကြောင့် Kalanchoe Kalandiva ရွက်များအဝါရောင်ပြောင်းလာသနည်း ဒီစက်ရုံအတွက်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မှုမျိုးလိုအပ်သလဲ။ အရွက်များသည်အဝါရောင်ပြောင်း။ ကျသွားသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအပင်တစ်ပင်၏အနိမ့်အရွက်များသည်သဘာဝအားဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအဝါရောင်ပြောင်းသွားပြီးမှကျသွားသည်။ ဒါဘယ်မှာလဲ ...
ဆေးခြောက်ကြီးထွားရန်မည်သည့်မီးခွက်များသည်အကောင်းဆုံးနည်း။ အပိုဆောင်းထွန်းလင်းရန်အတွက်လောင်ကျွမ်းသောမီးခွက်များသည်မီးထွန်းရန်အတွက်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းတို့သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု၏ ၃% နှင့်ကျန်အပူဓာတ်ရောင်ခြည်ကိုသာစားသုံးသည်။ ပို၍ လက်ခံနိုင်ဖွယ်သောဆီမီးခွက်တစ်ခု
“ မင်္ဂလာပါဘုန်းကြီး” ဘယ်စက်ရုံပဲ။
အဘယ်အရာကိုစက်ရုံ "MORNING ဘုန်းအသရေ" Ipomoea (Ipomoea Violacea); - မိသားစု: Convolvulaceae; - ယေဘုယျအမည်: Ipomoea; - မျိုးစိတ် - violacea (Morning Glory) - ဇာစ်မြစ် - မက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်း၊ ဂွာတီမာလာ၊ အနောက်အင်ဒီးစ်နှင့်တောင်ပိုင်းအပူပိုင်းဒေသတောင်တန်းများ။
မိုးလုံလေလုံအပင်များအတွက်မည်သည့်မြေဆီလွှာသည်အကောင်းဆုံးနည်း။ ယနေ့ခေတ်တွင်စျေးဆိုင်များသည်အပင်အမျိုးမျိုးအတွက်အမျိုးမျိုးသောမြေအရောအနှောများကိုရောင်းချကြသည်။ အထုပ်ပေါ်ရှိဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ပါ၊ ထိုတွင်အားလုံးဖော်ပြထားသည်။ အဲဒီမှာသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက် ...
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,641 စက္ကန့်ကျော် Generate ။